Ihe aha Maria pụtara. Ihe omimi nke Maria
Gịnị bụ aha Mary
N'ihi ntụgharị dị ụtọ, aha ahụ bụ Maria yiri nwayọ dị jụụ. Ka o sina dị, ọnụnọ nke ụda ahụ bụ "P", na-egosi na ọ dị ike na njirimara onye ahụ. Nwatakịrị nwanyị ahụ, aha ya bụ ndị nne na nna Mary, bu ụzọ kpebie ịbụ onye nwere ọmịiko na ọmịiko.
Mary pụtara "mwute", "obi ilu", na Iso Ụzọ Kraịst - "nne-nwanyi".
Aha nke aha Maria:
A maara aha Maria kemgbe oge ochie. Ọ bụ ebe Mariam Hibru si malite. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ndị ọkà mmụta sayensị, ruo ugbu a, ekwenyeghị na esi esi sụgharịa ya n'ụzọ ziri ezi. Ụfọdụ kwenyere na aha ahụ sitere na ihe mgbọrọgwụ pụtara "ajụ", ndị ọzọ, isi iyi si malite bụ okwu mmim (מירים), n'asụsụ Hibru, "obi ilu."
Ihe omume na nkọwa nke aha Maria
Masha na-etolite etolite dị ka nwata nwere onwe ya, nke nwere nsogbu ma dị jụụ. Ọ na-enwe mmasị ịkọrọ ụmụaka ndị ọzọ, karịsịa ndị na-eto eto. N'ịbụ okenye, ịhụnanya a maka ụmụ ọhụrụ na-adịgide - Maria, na-abụkarị nne mara mma nke na-ahụ ọdịmma nke ụmụ ya dị ka ihe ndụ pụtara. Obiọma na ọmịiko bụ àgwà ndị dị n'ime nwanyị nke nwere aha ahụ. N'agbanyeghi na Masha nwere ike igosi iguzosi ike, ma mgbe ufodu obula ikwesi olu ike, n'igosi ihe ndi o nwere na nkwenkwe ya, o bu ihe puru ime ya. Ọ naghị achọ ịkatọ ma ọ bụ kwuo okwu, echegbu onwe ya banyere nke a. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ime ihe na-adịghị mma. Nke a na-agwụsi ike, na-ekwu na, ọbụlagodi mgbe o tolitere, Masha ka bụ nwatakịrị. N'ụzọ na-akpali mmasị, yana mkpali, Mary nwere ike igosi ọrụ dị ukwuu na ichebara echiche n'ọmụmụ ihe ya na ọrụ ya. Otu nwa agbọghọ nke nwere aha a bụ ịrụsi ọrụ ike na ịdị uchu n'ihe niile e kenyere ya. Ọtụtụ ndị Mari bụ ndị dị elu. Onye na - enwe nsogbu, Maria ga - agbalịrị inyere aka.
Nhazi usoro na Mary dị mma nke ọma, ya mere, ya, nwere ike ịrụpụta nnukwu ọrụ na nhazi. Ọtụtụ mgbe, ọ na-ahọrọ ebe ọrụ ọ na-enweghị njikwa siri ike, ọ na-enwe mmasị ịrụ ọrụ n'adabereghị na ọrụ. Ndị ọrụ ibe ya nwere ekele maka nzaghachi ya, onye ndú - maka ịrụ ọrụ dị elu. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Meri ga-enwe ọganihu n'ihe metụtara ọrụ ọgwụ, ọgụgụ isi azụmahịa, nkà mmụta akwụkwọ.
N'alụmdi na nwunye Maria ji ezi obi elekọta banyere nwunye na ụmụ. Ọ bụ ezigbo nwanyị kwesịrị ntụkwasị obi, kwesị ntụkwasị obi, nkwenye nke di ya, aghụghọ na mmekọrịta pụrụ imerụ ya ahụ nke ukwuu. Otú ọ dị, Masha anaghị eme ọdachi na nke a, ọ dịghị elekwasị anya na ọdịda. Ke adianade do, enye, n'ezie, nwere ike iguzo onwe ya na ndị ya hụrụ n'anya.
Ezigbo mmasị banyere Maria
Dị ka ozizi ndị Ọtọdọks si kwuo, a sụgharịrị aha Mary ịbụ "onye nzihu." Ikekwe, n'ihi na nne nke Chineke nwere aha a.
Maria bụ otu n'ime aha kachasị aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Ukraine, Spain, Poland na Republic of Belarus.
N'ọchịchị Russia, a chọtara aha a n'otu obodo dị mma, gụnyere n'etiti ezinụlọ ndị isi na ndị nkịtị.
Aha Maria na asusu di iche:
Aha Maria na Igbo: Mary (Mary)
Aha Maria na Chinese: 馬利亞 (Ma-li-i)
Aha Maria na Japanese: マ リ ア (Ma-a-ri) / li>
Aha Maria na Spanish: María (Maria)
Aha Maria na German: Marie (Mary)
Aha Maria na Polish: Maria (Maria)
Maria ke Ukrainian: Mariya
Ụdị na ọdịiche nke aha Maria : Marusya, Mashenka, Mashka, Masha, Masukya, Mashulka, Mashulya, Manya, Manyunya, Manechka, Marusenka, Marya, Maryushka
Agba nke aha Maria : acha anụnụ anụnụ, lilac-acha uhie uhie
Ọkụ Mary : ọka ọka
Nkume nke Mary : diamond
Nicky maka aha Maria / Masha: Masyanya, Marusya, Mara, Miriam, Mary, Maska, Manka, Manya, Manka Bond, Tenderness, Virgo, Virgin Mary, Markovka, Mari, Ụda anyanwụ, Meri ọbara, Theotokos, Magdalena, Marzhikha, Murka
Embassy of Morocco na Belarus
Kedu aha Gleb pụtara?
Kedu aha Basil?
9 òtù dị egwu nke ụwa
Embassy nke Trinidad na Tobago na Russia
Akụkọ na-emenye ụjọ site na Naples: Oké ọdachi na ọdachi na-ekwu na Saint Yanoir buru amụma
Kedu aha Yaroslav
Echefula ihe ịrịba ama isii ndị a, ma ọ bụ otú egwu na-akụ n'ọnụ ụzọ gị
Embassy nke Cyprus na Ukraine
Gịnị bụ aha Ivan
Embassy nke Monaco na Russia
Ndị na - azụta mkpụrụ obi mmadụ - akụkọ gbasara akụkọ banyere Ekwensu
Embassy nke Myanmar na Belarus
Embassy nke Macedonia na Ukraine
Embryo 6 izu
Mittens akpụkpọ anụ
Jellied si ire
Onye na-enwu ọkụ eletrik
Nicknames maka obere nkịta
Ọgwụ nje mgbe e wepụsịrị nha
Benedict Cumberbatch na nwa ya
Salmon na sesame
Street Celebrity Style
Ọrịa ịba ọcha n'anya B
Mkpụrụ ndụ Plasma
Eke ụkwụ akpụ ụkwụ - mmiri 2014
Jeans njali elu - 92 foto nke nkecha oyiyi na flared jeans
Canopies maka ụlọ obibi
Kedu esi enweta akwa si na akwa?
Ogwe oche plastik
A mụrụ maka izu 38
Ndị na-amị ụmụaka
11 Arcana Tarot - uru
Nri mgbe ihicha ahu
Rihanna gara ije na denim Jaketị
Ihe ntanye nke Diamond - usoro mmegbu